Location : Taung Gyi Updated Date : 21,August 2020 Starting Price :
Address : No. 69, Mingalar Street, Mingalar Oo Quarter, Taunggyi, Shan State, Myanmar
Completation : 2021
Developer : SMART& STYLE CONSTRUCTION CO., LTD
Total Floor :7Floor
Unit Mix : Crush, Romance, Cherry, Pinewood, Stylish
Per Square Feet : USD 280 per sq-ft
သင်ဟာ ဟိုတယ်လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်ဖြစ်ဖို့ ငွေအရင်းအနှီးစုဆောင်းနေတုန်းလား?
အရင်းအနှီးတွေအများကြီးလည်း မရင်းနိုင်၊ စိတ်ကူးထားတာတွေနောက်မကျစေဖို့ အာရှမှာ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းမှုအကောင်းဆုံးဆုကို ရရှိထားသည့် အရမ်းအေးချမ်းပြီး ပြည်တွင်းနှင့်ပြည်ပရှိ ခရီးသွားလာမှု အများ ဆုံးဖြစ်သော မြန်မာနိုင်ငံ၏ အထင်ကရနေရာဖြစ်သည့် တောင်ကြီးမြို့တွင် တည်ဆောက်နေသည့် Hotel Mingalar Project တွင် ဟိုတယ်ခန်း (၁)ခန်း အနည်းဆုံးဝယ်ယူထားရုံနှင့် ဟိုတယ်လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဉီး ဖြစ်နိုင်ပါ ပြီ။
Hotel Mingalar Project အား တောင်ကြီးမြို့၏ အချက်ချာကျသည့်နေရာတွင် ဆောက်လုပ်နေပြီး 70% ပြီးစီး နေပြီးဖြစ်ပါသည်။
ဟိုတယ်၏အနီးနားပတ်ဝန်းကျင်မှာဆိုလျင် ကျောင်းများ၊ နာမည်ကြီး စားသောက်ဆိုင်များ၊ BBQ ဆိုင်များရှိခြင်း ကြောင့် တောင်ကြီးသို့လာရောက်လည်ပတ်သည့် Local ခရီးသွားများနှင့် Foreigner အများစု မျက်စိကျရာ နေရာတစ်ခုဖြစ်သည့်အတွက် ဟိုတယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် ကောင်းမွန်သောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
အခန်း အမျိုးအစား (၅)မျိုးရှိပြီးတော့
⭐ Romance အစရှိတဲ့ ခေတ်ဆန်ဆန် နာမည်လေးတွေပေးထားတယ့် အခန်းများကို မိမိစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ် Invest လုပ်ထားနိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။
Hotel Project မှာ ဘာလို့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမလဲ?
ဘယ်လိုအကျိုးအမြတ်တွေ ရမှာလဲ? ဆိုတာကို ပြောပြပါရစေ။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားသူအနေဖြင့် မိမိဟိုတယ်အခန်း ငှားရမ်းမှုအတွက် (အငှားအာမခံ ROI 8%) ကို (၁၀) နှစ်တိတိ တရားဝင်စာချုပ်ပါအတိုင်း ရရှိမှာဖြစ်သည်။
မိမိဝယ်ယူသည့်အခန်းပေါ်မူတည်ပြီး Decoration အပြင်အဆင်များနှင့် ဟိုတယ်အခန်းတွင်းပေးသည့် ပုံစံ အတိုင်း ရရှိမှာဖြစ်သည်။ ( မည်သည့် Furniture မှ ဝယ်ယူထပ်ထည့်စရာမလိုပါ။ လက်တင် ဟိုတယ်အခန်းကို ငှားရမ်းနိုင်အောင် Developer မှ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးမှာဖြစ်သည်)
100% ပေးသွင်းရန်မလိုဘဲ Bank Loan ဖြင့် နှစ်ရှည်အရစ်ကျ ဝယ်ယူနိုင်ရန် CB Home Loan နှင့် ချိတ်ဆက် ထားပြီးဖြစ်သည်။
(၁၀) နှစ် ပြည့်ပြီးသည့်နောက် မိမိအခန်းကို ပြန်လည်ရောင်းချလိုပါက Developer မှ အမြတ်ပေးပြီး ပြန်လည် ဝယ်ယူမည်ဖြစ်သည်။
LT2009006801: 1BR unit for rent in Star City Galaxy Tower, T...
LT2009006800: 1BR unit for rent in Star City, Thanlyin
LT2009006799: Ground floor unit for sale in Lanmadaw
LT2009006791: 2BR unit for sale in 45 Complex, Botahtaung
LT2009006790: Apartment for sale in Tarmwe
LT2009006789: Service Apartment for rent in Mayangone